Ugaaska Beesha Mudulood ee Kursiga tartanka u diiday Tarsan oo kalsoonida lagala laabtay + Sababta.. – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Ugaaska Beesha Mudulood ee Kursiga tartanka u diiday Tarsan oo kalsoonida lagala laabtay + Sababta..
Siyaasiyiin, Waxgarad iyo Cuqaal ka soo jeeda Beesha Ciise Mudulood Ujeejeen oo kulan ku yeeshay Magaalada Muqdisho ayaa sheegay in gebi ahaanba Kalsoonidii ay kala laabteen Ugaaskoodii Cismaan Cilmi Cumar.
Waxaa lagu eedeeyay Ugaaska Kalsoonida lagala laabtay in uu isku bedelay Siyaasi , bilaabayna in uu ka shaqeeyo Tafaraaruqa beeshaasi Ciise Mudulood.
“ wuxuu ku tagri falay awoodii dhaqan ee Beeshu u dhiibatay , iskana horkeenay dhammaan beesha Ciise Mudulood , iskana illaabay waxyaabihii beeshu dhaqanka u lahayd isagoo dhex dhigay Shaki iyo kala qoqobnaa beesha Dhexdeeda” sidaas waxaa lagu yiri Warsaxaafadeedka Beesha Ciise Mudulood.
Ugaaska ay beeshiisu Kalsoonida kala laabatay ayaa horay loogu eedeeyay in uu is hortaag ku sameeyay Musharraxnimada kursiga Aqalka Hoose Guddoomiyihii hore ee Gobolka Banaadir Maxamuud Axmed Nuur Tarsan.
Previous: AMISOM oo lagula xisaabtamayo Xasuuqii Sh/hoose & Guddi loo saaray..
Next: Magacyada Labadii Gabdhood ee lagu dilay Canada + Xog dheeri ah